Iintengiso zamabali e-Instagram Funda ngoku! Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
NgoJanuwari 9, 2019 0 IiCententarios 956
I-Instagram liqonga lokusebenzisana elikuvumela ukuba uthathe ishishini ukuya kumanqanaba entengiso aphambili. Kwiminyaka embalwa, i iivenkile kunye namashishini Ngokubanzi, bafumene inethiwekhi yoluntu eyaziwayo indlela yentengiso, nangona ingaqhelekanga, isebenza kakhulu. Kungenxa yoko le nto izibhengezo zee-Instagram ibali zazenzelwe ukunceda yandisa ukuthengisa lwamashishini kunye neenkampani nokuba zithini na inqanaba lomgaqo-siseko abanazo.
Kutheni usebenzisa izibhengezo zee-Instagram ibali?
Ngokusebenzisa intengiso yedijithali yeqonga ngeentengiso zeeNdaba ze-Instagam, iivenkile kunye neevenkile Bavumelekile ukuba bafikelele kubaphulaphuli abanqwenelekayo. Oku kufezekiswa ngokushicilelwa ngeendlela ezahlukeneyo ezitsala umthengi. Ukongeza, ukhuphiswano kwi-Instagram ibali leentengiso lincinci kakhulu xa lithelekiswa namanye amaqonga, anjenge-Facebook. Nditsho umsebenzisi ziya kunciphisa iindleko Kule ntengiso iluncedo kakhulu kwinkampani yakho.
Ngenxa yentengiso yamabali e-Instagram, amashishini ahlala enyusa uloyiso, kuba ukongeza ukuvumela ukwenza marca kwaye yomeleze ukuqatshelwa kwayo, iya kuba nakho ukucacisa ukuthengisa kunye nabanye.
Ufuna cima imbali yakho kwi-Instagram? Siyakuxelela.
Izinto ezifunekayo kwiNtengiso yeBali le-Instagram.
Ukusebenzisa inethiwekhi yoluntu enomtsalane ngendlela enokuthi ibhenefithi yeshishini. Kwaye ngale ndlela, ukusebenzisa ezona zixhobo zisebenzayo kwimarike, ezinjengeentengiso zamabali e-Instagram, kuya kufuneka ube nesixa esincinci sokuqokelela.
Kuyimfuneko, ukukwazi ukusebenzisa ii-ads zeMbali ze-Instagram, ukuze ube iakhawunti kwiNtengiso ze-Facebook. Ukuba awusenayo iakhawunti esele ikhankanyiwe, ungakwenza oko kwiwebhusayithi esemthethweni yeqonga.
Kuya kufuneka ukuba umsebenzisi aqhagamshele iphepha lenkampani kwiqonga Facebook kunye nenethiwekhi yezoluntu ye-Intanethi, ukuze ube nokufikelela kwiintengiso zeMbali ye-Instagram.
Kuya kufuneka wenze inkqubo ye Ukuguqulwa kwe pixel kulayishwe umlinganiso wenguqulelo ezenziwe ngumntu ngamnye kwiintengiso ze-Instagram. Kwaye ke yenza intengiso efanelekileyo kunye iflegi yomthengi ekujoliswe kuye.
Unokuba nomdla uyithenga kanjani into oyithandayo kwi-Instagram.
Ukulungiswa kweeNtengiso zeeNdaba ze-Instagram yinto ephambili ukubaluleka okubalulekileyo ukufikelela kwinjongo oyifunayo. Ngamanye amaxesha umthengi kufuneka asebenzise iiNtengiso zeManejala ukulungiselela iintengiso zee-Instagram zeeNdaba ngendlela efanelekileyo efumanekayo kuluntu olufunayo.
Kubaluleke kakhulu ukuba ekuqaleni kwamalungiselelo eentengiso zeeNdaba ze-Instagram ucacisa okanye ulichaze iqela oya kulo eyalela. Kuba oku, ngokufanayo namanye amaqonga, kuya kuvumela ukwahlula phakathi kwamaqela athile okanye intengiso evulekileyo kuzo zonke iindidi zabaphulaphuli.
Amabali e-Instagram Ad
Emva kwexesha, kuya kufuneka uhlengahlengise ukuze upapasho lukhetheke kwi-ads zeMbali ye-Instagram. Ke, iphulo liya kuba lelokusetyenziswa amabali awodwa, kwaye ungavulekeleki kuyo yonke into Uhlobo lokushicilela.
Ixabiso kunye nexesha
Xa uqala isicwangciso sentengiso, imali emiselwe ukutyala kufuneka ichazwe ngokucacileyo. Ngokwesiqhelo, ezona zixhobo zibalaseleyo zezona zinendleko eziphezulu; Nangona kunjalo iintengiso zamabali e-Instagram zezi ngaphandle. Kuba iindleko zayo zincinci, kwaye ukusebenza kwayo akunakuphikwa. Ukongeza, ixesha lekhankaso kufuneka licacisiwe, oko kukuthi, kuya kuba nini, hayi kuphela isibhengezo kodwa ikhontrakthi ngokubanzi iyakuba isebenza.
Xa usebenzisa iintengiso zeBali lesiKhokelo, umsebenzisi makazazi ezi zinto ubungakanani obufanelekileyo Upapasho. Oku kulungiselelwe kumyinge we-9: 16; Ke imifanekiso kunye neevidiyo eziza kupapashwa kufuneka zibe nkqo.
Ngokucacileyo, emva kokuyila ukupapasha kunye nokumisela iinkcukacha zentengiso yeBali le-Instagram, kuya kufuneka uchaze ukuba yeyiphi i-akhawunti ezakupapashwa kuyo. Ukongeza, iqonga liqukethe inketho ekuvumela ukuba unyuse Inani lotshintsho, oku kuya kuba likhonkco lokongeza kwiwebhusayithi yakho kwi-Instagram ibali leNtengiso. Ngale ndlela, ibali elipapashiweyo, nokuba libhalwe njani na, liya kuba sezantsi kwikhonkco webhsayithi yenkampani.
Isixhobo seNtengiso seZibali ze-Instagram sizimise njengeyona ndlela yokutyala; intengiso ebonelelwe kubo iphumelele ukufikelela kwithagethi entsha ngendlela efanelekileyo nechanekileyo. Kwimeko yeengcali zokuthengisa, umsebenzi wazo ufikelele kwinqanaba elitsha lokufikelela kwehlabathi ngothungelwano lwentlalo. Kwaye kwabo bangenzi ngaphezulu kwentengiso, iintengiso zeMbali ye-Instagram, vumela ukuzalisekisa iinjongo zayo ngendlela elula kunye nehambelana.
Ngokwenza ukusetyenziswa kwe-Instagram njengeqonga lokukhula kweshishini, ukufikelela kwishishini ukukhula ayizukunqandwa. Ukuba usetyenziso olufanelekileyo lwesixhobo lwenziwe, kuyakwenzeka ukuba kunike iintengiso ezibiza kwaye zikhuthaze umdla kunye nomtsalane wababukeli. Oku kuguqulelwa kwinani elikhulu le nokufuna malunga nentengiso yeNdaba ye-Instagram nganye.
Sikuxelela ukuba wenze njani cima iakhawunti yakho ye-Instagram.
1 Kutheni usebenzisa izibhengezo zee-Instagram ibali?
2 Izinto ezifunekayo kwiNtengiso yeBali le-Instagram.
2.1 Izikhangiso ze-Facebook
3 Ukudalwa kwentengiso
3.1 Uluhlu lwabathengi
3.2 Amabali e-Instagram Ad
3.3 Ixabiso kunye nexesha
4 Utyalomali olukhuselekileyo
Hlaziya i-Instagram, Fumana ngoku!